မြန်မာပြည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂေဟာ | ရွှေမင်းသား
Home » သတင်း » မြန်မာပြည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂေဟာ
မြန်မာပြည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂေဟာ
မြန်မာပြည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂေဟာ သို့ အလှူငွေ လှူဒါန်းနိုင်….
ကျောင်းဖွင့်ချိန် ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ကျောင်းဝတ်စုံ ၊ စာအုပ် ၊ ခဲတံ ၊စာရေး
ကိရိယာစသော ကျောင်းအသုံး အဆောင် ၊ဆောက်လုပ်ဆဲ ဖြစ်သော အဆောင်သစ်
အတွက် အလှူငွေ လိုအပ်နေပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်ကာနာမည် ပြောင်းလဲခဲ့သော
"မြန်မာပြည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂေဟာ" သည် မြန်မာပြည် အရပ် ရပ်ရှိ
" အစား အသောက် ကျွေးမွေးဖို့ အတွက် လှူဒါန်းချင်သူတွေကလည်း ပိုက်ဆံထုတ်
ပေးပြီး ဘာကျွေးချင်တယ်..စီစဉ်ပေးပါဆိုရင် အားလုံးစီစဉ်ပေးတယ်…ကျွေးမွေးဖို့ဆိုရင်
ကျွေးမွေးဖို့ ၊အဆောင်ဆောက်ဖို့ ဆိုရင် အဆောင်ဆောက်ဖို့ အလှူရှင် စိတ်တိုင်းကြ
ဆန္ဒအတိုင်း စီစဉ် ပေးပါတယ်…" ဟု ဂေဟာမှူး က ဆိုပါသည်။
နာဂစ် ကြောင့် အမှန်တကယ် မိဘ နှစ်ပါးစလုံး ကွယ်လွန်ကာ ခိုကိုးရာမဲ့ ၊ နေစရာမဲ့ သော
ကလေးများကို အကန့် အသတ်မရှိ ၊လူမျိုးမရွေး ၊ ဘာသာမရွေး လက်ခံနေပါသည်။
အသက် ၂ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အတွင်း ကလေးငယ်များကို လက်ခံပါသည်။ ကလေးများကို သက်ဆိုင်ရာ
ရပ်ကွက် ၊တိုင်း ၊ဒေသ မှ လူမှုဝန်ထမ်း အဖွဲ့ အစည်းက ထောက်ခံပေးလျှင် လက်ခံပေးပါသည်။
ဂေဟာ သို့ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းလိုပါက……………………….
အမှတ် (၁၁၂) ၊ အရှေ့ (၂)ရပ်ကွက် ၊ ၀ါးနက်ချောင်းကျေးရွာ ၊မှော်ဘီ မြို့ နယ်၊
ဖုန်း ……၆၂၀၃၉၉ ။